Tena ilaina ve ny rindranasa hanatsarana ny Android? | Androidsis
Fampiharana hanatsarana ny Android tena ilaina ve izy ireo?
Ao anatin'ny tontolon'ny fampiharana ho an'ny Android, misy maro amin'ireo antsoina hoe fitaovana izay heverina fa tompoina manatsara ny Android ary ataovy mahomby kokoa ny rafitra fikirakirana finday ampiasaina eto an-tany. Fa inona no marina amin'ireo rindranasa ireo? Tena mahomby sy ilaina amin'ny fampandehanana tsara ny terminal Android -ntsika ve izany?
Manaraka izany dia homeko anao ny fomba fijeriko manokana momba ireo rindranasa ireo izay mampiavaka azy ireo sy mampiavaka azy ireo mampanantena antsika hanatsara ny Android hahazoana fahombiazana tsara kokoa avy amin'ny terminal anay fa tsy farafaharatsiny ny terminal midadasika sy avo lenta, Solosaina finday tena izy ireo miaraka amina famaritana ara-teknika izay matetika mihoatra ny solosaina finday.
Amin'ny ankapobeny amin'ity sokajy fampiharana ity o fitaovana mampanantena hanatsara ny Android ho an'ny fandidiana haingana kokoa, tsiranoka na azo antoka kokoa aza, matetika dia mahita vondrona lehibe roa isika. Ny voalohany amin'ireo dia mety ho ny antso fampiharana fanadiovana o fampiharana fanadiovana, izay mazàna dia misy fitaovana maromaro toa ny Toerana malalaka RAM, mpanadio cache na ny milina fikarohana amin'ny alàlan'ny lanjany mba hahafantarana hoe karazana rakitra manao ahoana no mitadidy ny fahatsiarovan-tena anatiny an'ireo fitaovantsika Android.
Nantsoina ireo fampiharana ireo "Cleaners", ho ahy manokana izy ireo dia a mazava scam sy sakana ho an'ny terminal Android. Voalohany indrindra satria ny rafi-pandidiana Android antsika, ao anatiny Fikirana / fampiharana efa manana fitaovana izy ireo izay, ohatra mazava fitadidiana cache ny famoahana azy tsy mila fitaovana ivelany na inona na inona karazana ataon'izy ireo dia ny mameno ny fahatsiarovan-tenan'ny Android antsika amin'ny fampiharana tsy misy ilana azy.
Mikasika ny ampahany amin'ny fahatsiarovana RAM na ny fanadiovana azy tanana na tsia, ny fampiasana na tsia ny fampiasana fitaovana ivelany hanaovana azy. Fehezanteny iray ihany no holazaiko aminao: «RAM no ampiasaina ary Android dia ampy fahombiazana, indrindra manomboka amin'ny kinova 4.0 mandroso, mba hitantanana mandeha ho azy ny fitadidiana RAM sy ireo fampiharana akaiky izay najanontsika tamin'ny fampiatoana ny rafitra fiasantsika dia mila RAM bebe kokoa sy loharanom-pahalalana bebe kokoa. ».
Ny porofo tsara an'izany dia azo jerena rehefa manana fampiharana misokatra mihodina any aoriana isika ary manandrana manao lalao na fampiharana heverina ho mavesatra, amin'izany fotoana izany, Ny rafi-piasan'ny Android dia afaka manidy ny rindranasa rehetra izay tanterahintsika ao ambadika, hanomezana laharam-pahamehana ny fampiharana ny fampiharana na lalao voalaza etsy ambony. Efa nitranga tamintsika ve fa rehefa namela lalao ny lalao tianao indrindra dia hitantsika fa maimaimpoana tanteraka ny fahatsiarovana RAM an'ny terminal Android anay toa ny nampiasantsika ny iray amin'ireo fitaovana fanadiovana fitadidiana RAM ireo?
Ny hany zavatra azontsika amin'ireo Ny fitaovana mamoha RAM na manadio dia mandany bateria bebe kokoa, satria rehefa manafoana ireo rindranasa voatahiry ao amin'ny RAM dia tsy maintsy manokatra azy ireo tanteraka ny rafitra miasa miaraka amin'ny fandaniana amin'ny loharanom-bola fanampiny ary ny fantsona be loatra amin'ny baterin'ny terminal Android anay.
Mikasika ny sokajy ny fangatahana voalaza anarana antivirus ho an'ny android, ny ankamaroan'izy ireo hanombohana dia fisolokiana na fisolokiana fa ny hany zavatra ataon'izy ireo amin'ny mpampiasa dia ilay antsoina hoe effets placebo, na inona no itovizany, manome fiarovana tsy azo antoka sy tsy azo antoka izy ireo ary mety hampidi-doza aza.
Avy eo misy programa antivirus sasany izay rindranasa izay heverina ho natao hiarovana ny Android, na dia efa nolazaiko taminao aza fa kely indrindra ireo, Maitso loatra izy ireo na azo antoka loatra fa tsy handao anao akory izy ireo mametraka fampiharana amin'ny endrika APK satria azo antoka, amin'ny ankamaroan'ny tranga ho hitan'izy ireo ho trojan na virus io.
Amin'ny tranga antivirus ho an'ny Android dia tsy ilaina ho ahy satria ho ampy ihany ny fanarahana ny fitsipiky ny saina mahazatra mba tsy ho voaro amin'ny fandrahonana isan-karazany mandrahona ny rafitra fiasa Android. Fitsipika fiarovana vitsivitsy izay azontsika fintino amin'ireto teboka ireto:
manandrana misintona afa-tsy fampiharana avy amin'ny fivarotana fampiharana Android ofisialy. Ny Google Play Store no tiako holazaina.
Raha toa ka mametraka rindranasa ivelany amin'ny tsena Android dia alao antoka fa antoka hatrany ilay tranonkala ampidirinay azy ary azo antoka ny loharano.
Aza mijery ireo tranonkala mamoa fady amin'ny Android satria eo no ahitana ny ankamaroan'ny loza mitatao amin'ny terminal-anay.
Jereo hatrany ireo alalana angatahin'ireo rindranasa aminay hametraka amin'ny Android isika, eny fa na dia ireo sintomina na apetrakay amin'ny magazay ofisialy toa ny Play Store na Amazon Apps aza.
Mifandraisa amin'ireo tambajotra Wi-Fi matoky.
Aza mampifandray ny Android amin'ny solosaina tsy mahazatra toa ny call center, tranombokim-panjakana sns, sns.
Ataovy tsy mandeha tsara ny debugging USB ary mampihetsika azy fotsiny rehefa tena ilaintsika izany.
Manana fahazoan-dàlana hametraka fampiharana avy amin'ireo loharanom-baovao tsy fantatra. Hampiasa azy ireo fotsiny isika rehefa tena mila azy ireo.
Araka ny hitanao, ny fenitra sy fitsipika rehetra nolazaiko teto dia fitsipiky ny fahatsapana fahadiovana madio indrindraTahaka ny tsy hamelanao ny lakilen-tranonao ho an'ny olon-tsy fantatra na hamela azy ireo na aiza na aiza, ny fitsipika hampiasaina tsara ny Android anao dia tsotra toy ireo izay mifehy ny fiainanao isan'andro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » fiarovana » Fampiharana hanatsarana ny Android tena ilaina ve izy ireo?
Juan Carlos Melgarejo dia hoy izy:
Amin'ity indray mitoraka ity dia tena tsy miombon-kevitra aminao aho, voalohany, amin'ny elanelam-potoana avo na salantsalany miaraka amin'ny ondrilahy 2 na mihoatra dia tena mora ny mitantana azy, tsy dia amin'ny ambaratonga ambany misy ondrilahy 512 mb, ny rafitra miasa dia mitentina 300 mahery mb, mandray eny na eny ianao ho fanatsarana memoara, nanana Huawei G510 aho ary mandra-pametrahako ny Seeder dia nanomboka azo ampiasaina ny telefaona
Valiny tamin'i Juan Carlos Melgarejo
Marina ny voalazanao JC Melgarejo, raha manana ondrilahy 512 mb ambany ianao, dia mila mitantana na tsia ny fitadidiana, ary ny momba ilay antivirus, ahoana izany, misy marika PC fanta-daza. izay misy kinova tsara ho an'ny android, ny sasany maivana noho ny hafa, saingy ilaina izy ireo, tsy maninona izy ireo, ary ny fahaiza-misaina dia mitombina ihany koa, mazava ho azy
Nahuel Gomez Castro dia hoy izy:
Toa tsy toa an'io daholo ny antivirus, ary miasa ny optimizers ho fahatsiarovana, ohatra, manana moto g aho mampiasa ilay master madio, raha vao sendra nametraka lalao avy teo amin'ny playstore aho ary nianjera ary nofoanana, ary Naka toerana izay tsy azoko nofafana na nampiasaina aho, satria raha nametraka nisintona indray aho dia nanomboka naka toerana bebe kokoa, dia tsy nahafantatra izay efa alaina, teo izy io rehefa nampiasa master madio sy fanafody masina aho. Ary ny momba ilay antivirus, raha mandeha izy io satria mahatsikaritra ireo fampiharana "mampidi-doza" faran'izay betsaka (satria afaka manova be ny android) sy ireo fisie virus mety ho voatahiry ary manome ahy safidy hamafana na hamela azy ireo. Ex: Mahita framaroot ao anaty fotony miaraka amin'ny filaminan'ny cm aho
Valiny tamin'i Nahuel Gomez Castro
jimg dia hoy izy:
Tsy dia mifanaraka amin'ny lahatsoratra aho. Ny findaiko dia Samsung Galaxy s3 maimaim-poana miaraka amin'ny stock ROM misy RAM 1Gb sy android 4.3, ary hitako ny fampiharana fanadiovana tsara amin'ny tranga sasany, toa ahy. Misy lalao mavesatra, jereo ny Real Racing 3, izay manana faritra manokana (Circuit 24 heures - Le Mans) izay misarika RAM be dia be, raha ny tena izy dia tsy maintsy mamoaka ny fampahalalana rehetra amin'ny fampiharana ivelany aho (ao anaty boaty 29 no misy azy rehetra. amin'ny 1). ram azo atao, ary azoko atao ihany ny mihazakazaka an'io faritra io raha tsy manana RAM maimaim-poana 500MB farafaharatsiny aho. Satria "tsy ofisialy" dia tsy misy fanavaozana intsony ity terminal ity, tsy haiko raha miaraka amina android hafa toy ny kitkat ny mpitantana memo RAM dia ho tsara kokoa, tsy haiko izany. Raha tsy nanana an'io fampiharana ivelany io aho dia afaka tsy milalao hazakazaka sasany, ohatra, ny lalao na ny app, na inona na inona, manakana ahy ary mamerina ahy amin'ny birao lehibe, tsy misy ny fandefasana tatitra, izay indraindray afaka. Ary toa ahy, fantatro ny tranga maro izay nanolorako ny fampiharana ity fampiharana ity, indrindra ny famoahana RAM.
Mamaly an'i jimg
Tena miombon-kevitra aminao aho jimg, manana ondrilahy 1 gb an-telefaona aho ary rehefa afaka ora maromaro nampiasaina, izay efa nanokafako rindranasa marobe, nanomboka "taitra" kely ny telefaona, ampitaiko aminy sy ny Voila ny kifafa Master madio. !.
Lehilahy amin'ny ora dia hoy izy:
Ry olona tsotra: faka, maintso, tompony madio ary voila. Ny telefaona toy ny landy
Valio amin'ny OLON'ANDRIAMANITRA
fredy valeriano dia hoy izy:
Tena hajaina ny fomba fijerinao.
01 • fa araka ny tokony ho fantatrao dia mampiasa spindles apk an'ny antoko fahatelo izahay noho ny antony tsy mifanaraka amin'ny vakizoro na fone ananantsika avy amin'ny kinova taloha na satria tsy misy intsony ao amin'ny google estore. Aza miteny amin'ny tenanao hoe tsy zava-dehibe ny antivirus. Aleo mitandrina noho ny mitomany
02 • Na dia marina aza fa ny rafitra android dia mahay mitantana ny fahatsiarovana ondrilahy sy manidy ny rindranasa ho azy. Tsy dia mandaitra loatra amin'io asa io toy ny dokam-barotra noho izany raha mila atao tanana. Mba tsy hanakatonana ny rindranasa izay sokafana indray avy eo dia mila manisy marika fotsiny ianao mba tsy hikatona
Valio i fredy valeriano
Cristian Avila dia hoy izy:
Salama daholo, nandinika lahatsoratra tsy tambo isaina aho hanatsarana ny HTC pucha iray isaky ny manokatra ny chrome dia hihamangatsiaka ary nijanona toy izany nandritra ny fotoana ela aho nahita hevitra vitsivitsy hamahana ny olako dia manaiky aho fa ilaina ny mpanatsara nefa miankina amin'ny RAM fahatsiarovanao izay nampiasanao x taona nanidiana ny master master ary nosokafana indray ny apps .. Tsy haiko raha hevitra mety .. Niezaka ny zava-drehetra aho mandra-piverin'ny sela avy tany frabica. ary tsy misy .. ary hatramin'ny be dia be aho dia nanandrana tamin'ny appCPU Root ... Fanafody masina izao dia mandeha haingana be ny sela ary tsy mangatsiaka ny efijery rehefa mizaha na zavatra tsara hafa rehetra tokony hataonao dia ho faka ... Fa hitanao tsara ny tsy fitovizany ary tsy ilaina ny mampiasa Master madio aza ... Ity app ity dia tsy mpamono olona mihitsy ... Ny ataony dia ny manatsara ny hafainganan'ny sela, ianao fotsiny amboary ny masontsivana sasany ary voila misy tutorial maro ... Manoro hevitra anao aho indrindra raha manana sela ambany ianao ... ny HTC-ko… nandaitra be tamiko io…
Mamaly an'i avila cristian
Tena zava-dehibe ve ireo rindranasa ireo amin'ny telefaona maoderina, satria nisintona an'i Psafe aho dia nanadino zavatra maro izay nampanahy ahy teo aloha.
Ireo rindranasa ireo dia tsy misy dikany avokoa, ny hany zavatra ataon'izy ireo dia ny fandaniana loharano ary mifandray amin'ny Internet, izany hoe, avelany hiadana kokoa ny telefaoninao fa tsy fifanoherana, sa tsy izany? Ho fanampin'ny miasa ho toy ny spyware
Lupot dia hoy izy:
Efa nanandrana ny tompony madio aho, tompona UI sns, ny hany azoko dia ny hafanan'ny finday tafahoatra hatramin'ny 60% ka nahatonga ny sarimihetsika nanao balaonina, tsy nanapotika ny sela fart. Ny fantatro dia noho ny avast namaha ny olan'ny enta-mavesatra be izy nefa mbola tena nampiahiahy ny antivirus izy, mpitsikilo tokoa izy ireo.
Valiny tamin'i Lupot
Hanala hatsiaka i Ami ary hanatsara ny hafainganam-pandeha indraindray mandra-pahatongan'ny findaiko na ny app misy ahy ankehitriny, tsy mametrapetraka na inona na inona ataon'ny Mobo intsony aho raha tsy misy hosoka na fitaka.
Eny, amin'ireo hitako tany, ilay tena tiako indrindra ary nety indrindra tamiko ny nanatsara ny habakan'ny findaiko dia ity hasehoko anao ity, antenaiko fa manampy
Eto ny Zoma Mainty an'i Amazon: fonosana rindrambaiko maherin'ny 40 maimaim-poana mihoatra ny 100 €
Ninja dia mihazakazaka amin'ireo mpilalao hafa miaraka amin'i NinJump Dash